Linux Mint 12 "Lisa" ကိုရရှိနိုင် | Linux မှ
သုံးစွဲသူများစွာကဒီသတင်းကိုစောင့်နေပြီးနောက်ဆုံးတွင် ငါတို့စပ်ကြားမှာ Linux Mint 12 "Lisa"အသုံးပြုသူများအားတူညီသောအတွေ့အကြုံကိုထုတ်လွှင့်ရန်ကြိုးစားသောဖြန့်ဖြူးခြင်း GNOME 2နှင့် GNOME 3.
ယင်းကိုမည်သို့အောင်မြင်နိုင်မည်နည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတူ MGSE, များအတွက် extension ၏အုပ်စုတစု GNOME shell ကို ကဲ့သို့တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစား GNOME 2။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လိုပါကလည်းအသုံးပြုနိုင်သည် အိမ်ထောင်ဖက်တစ်လမ်းဆုံလမ်းခွ GNOME2အရာသေး 100% တည်ငြိမ်သည်မဟုတ်, ခြောတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းတိုးတက်စေလိမ့်မယ်။
ငါတို့ပြီးသားပြောင်းလဲမှုများအကြောင်း ယခင်ကပြောပြီ, အသစ်ပြန်လည်အနုပညာလက်ရာများ, ပြင်ဆင်ချက်အများအပြားနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသစ်တစ်ခုကိုပုံမှန်အားဖြင့်, ဒါကြောင့်ယခုသင်ကသာ download လုပ်ပါရန်ရှိသည် ဒီ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Linux Mint 12 "Lisa" ရရှိနိုင်
RC ကိုကြိုးစားကြည့်တယ်၊ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် RAM အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။
သတင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့တာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ LinuxMint ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေတယ်။ လူများစွာသည်သွားများကိုနစ်ချင်ကြသည်ဟုထင်ရသည်။
စကားမစပ် Ubuntu ဗားရှင်းလား၊ Debian ဗားရှင်းလား။ ငါလိုချင်တာတစ်ခုက LMDE ပဲ။
၎င်းသည် Ubuntu အခြေခံဗားရှင်းဖြစ်သည်။
LMDE သည် Debian Testing repositories ပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ ထို့ကြောင့် release cycle သည်မတူပါ😀
ငါတို့က gnome3shell, ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသုံးတာကိုမေ့သွားစေတဲ့ဂန္တ ၀ င်ထိတွေ့မှုကိုသူတို့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။
ငါထင်တာကတော့သူတို့ဟာ icon တွေကို update လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဥပမာ faience ။ ပြီးတော့ windows theme (close, minimize and maximize button) က mint-x ကိုပိုသဘောကျတယ်။
ငါသူတို့တဖြည်းဖြည်းပွတ်လိမ့်မည်ဟုအရာဖြစ်ကြ၏သေချာပါတယ်။ LM နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာမှာ၎င်းတို့အသိုင်းအဝိုင်းကိုများစွာနားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုအကြံဥာဏ်များကို (သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်) အဆိုပြုပါက၎င်းတို့သည်ကြားနာခြင်းခံရလိမ့်မည်။
Fedora Utils (သို့) သင့် Fedora ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ